Boston Collegiate Charter School (Xarunta Sare) | Boston School Finder
Charter (qaniga ah)7aad - 12aad
Lambarka Taleefanka 617-265-1172
Boston Collegiate Charter School (BCCS) waa dugsi lagu dhigto fasalada shanaad-12aad oo charter ah ardaydana loogu diyaarsho kuleejka. Dugsi waa dookha dugsiyada dawlada ee aan doorashada lahayn ee ugu waxbarashada fiican oo kuyaala Boston sida kucad natiijooyinka Meelaynta Dheeriga ah waxayna kuqiyaastay laanta Wararka Maraynkanka iyo Warbixinada Aduunku dugsiga sare ee aqoon ahaan ugu fiican oo charter ah kuna yaala Boston. BCCS wuxuu diirada saaraa waxbarasho heer sare ah, asagoo raacaaya mabaadii'ada aasaasiga ah oo ah in haddii aysan jirin macalimiin tayo leh, inaan wax kale macno samaynayn. Masraxa dugsiga ayaa ah iskudhafnaanta ardaydiisa: ardayda ayaa kasoo kalajeeda dhamaan dafaha magaalada Boston ayadoo iskudhafnaanta dugsiga ee dhinacyada isirka, qoomiyaa, iyo heerarka dhaqanka dhaqaale ee ardaydu ay muujinayaan iskudhafnaanta bulshada magaaladeena. Waaan kudadaalaynaa inaan ahaano dugsi taageero siiya dhamaan ardayda aana noqono meel arday kasta laga yaqaano si qoto dheer. Dhamaan ardaydu waxay dhigtaan Casharada Xirfadaha Heer Kuleej oo kabilaab maaya fasalka 9aad labo maalmood asbuuc kasta semesterka koobaad. Fasalka 10aad ardaydu waxay baaraan diihaalkooda iyo waxbarasho kusaabsan sida qofku kugalo xirfadaha shaqooyinka uu xiisaynaayo. Inta lagu jiro sanadka fasalka 11aad ardaydu waxay diyaarshaan Mashruucooda Tijaabada Barashada ee capstone -- ayagoo kubarta labo asbuuc, oo ay si adag ubaranayaan biloowga shaqada bisha Janaayo intay kujiraan sanadka ay fasalka hoose kujiraan. Xiliyada diraacda iyo gu'ga ardaydu waxay sidoo kale udiyaar garoobaan imtixaanaadka ACT iyo SAT, waxayna bilaabaan raadinta kuleej iyo hanaanka codsiga kuleejka. Waxaan sidoo kale bixinaa safarka kuleejka oo hal asbuuc ah oo ay kaqaybgalayaan arday ladoortay marka sanadku dhamaado kadib bisha Juun. Sabab laxariirta safarka dugsiga oo kabilaabmaaya fasalka 5aad, ardayda fasalada sare ee dugsiga sare ee BCCS ee caadiga ah wuxuu booqanayaa ugu yaraan 15 kuleej kahor intuusan bilaabin hanaanka codsiga kuleejka. Waxaa intaa siidheer, waxaan bixinaa chromebooks shaqsi ah oon siino arday kasta oo kujira fasalada 11aad iyo 12aad. Ardayda dhigta fasalada 9 iyo 10 waxay labtop-yo ay kahelaan macalimiintooda. Dhamaan ardayda fasalada sare ee dugsiga sare ayaa usafri kara Faransiiska iyo Spain ayagoo kaqaybgalaaya safarka ardayda fasalada sare kubaxaan bisha Feebaraayo ee fasalkooda 12aad. Waxaan leenahay Kooxo kaladuwan oo Taageerada Qoyska iyo Talo bixinta kashaqeeya si ay gacan uga gaystaan xariirka joogtada ah ee taleefanka, emailka iyo fariimaha qoraalka ah.
Yoolka Boston Collegiate Charter School waxaa weeye in ay arday walba u diyaariso kulliyada. Waxaan bixina manhajka diyaarinta kulliyada oo leh waxbarasho adag oon siino ardaydeena dhigta fasalada shanaad ilaa 12. 100% ee ardaydeena qalinjabineyso waxaa laga ogolaaday kulliyada; intooda badan waxay ahaanayaan kuwa ugu horeeyo qoysaskooda oo dhamaysta digriiga kulliyada.
Fasalada tobadaad iyo sideedaad: waxaa labaxshaa 7:30 am quraa;, fasalka subaxii; ardayda dhigata dugsiga sare: casharada gaarka ah ee kahor dugsiga markii loobaahdo. Saacadaha xafiiska 7:30 am - 5:00 pm.
3:00-5:00 pm, fadlan fiiri Barnaamijyada Kabaxsan manhajka iyo Ciyaaraha. Casharo gaar ah ayaa ladhigaa kadib dugsiga.
Shaar leh astaanta dugsiga iyo dabo gaab kaaki ah. Dharka BCCS ee ciyaaraha iyo kulanada kooxaha ayaa sidoo kale la ogalyahay.
Waxaan ubalan qaadaynaa boos inay helaan dhamaan ardayda dhigta Boston Collegiate Qaybtiisa Hoose (kaasoo lagu dhigto fasalada 5aad - 6aad).
Waxaan bixinaa 15 kulan oo ay siidheer yihiin 8 Ciyaaro Kaladuwan.
Baseball-ka, Softball-ka, Kubadda kolleyga wiilasha, Kubada kolleyga Gabdhaha, Orodka banaanka, soosarka wiilasha, soosarka gabdhaha, Tartanka Wiilasha Wadanka gudahiisa, Tartanka Gabdhaha Wadanka gudahiiisa, kubadda laliska ee Gabdhaha, Sabtida - Kubada Calanka